बैंकिङ खबर – Page2– Banking Khabar
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ १७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा
बैंकिङ खबर । ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न जिल्लाहरुमा थप १७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सिराहाको सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठा चोक, कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका– १ रेगिल, पर्साको पर्सागढी नगरपालिका– १ मनवा बजार, पर्वतको मोदीगाउँपालिका – ७ राम्जा ठाँटी, परासीको सुनवल नगरपालिका – ११ जर्गाहा, संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका – ११ लोहाकोट,
बैंकिङ खबर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले किराना व्यवसायीहरुका लािग आकर्षक अफर ल्याएको छ । बैंकिङ कारोबारलाई ‘क्यासलेस’ बनाउने उद्देश्यका साथ बैंकले क्यूआर कोड प्रवर्धन गर्न किराना व्यवसायीहरुका लागि आकर्षक अफर ल्याएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत किराना पसलले आफ्ना ग्राहकलाई सामान बिक्री गर्दा ग्राहकको ‘फोन पे’ सञ्जाल भित्र रहेको कुनैपनि बैंकका मोबाइल बैंकिङ मार्फत
बैंकिङ खबर । हिमालयन बैंक लिमिटेडले असाहय अनाथ बालबालिकाहरुलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ललितपूर महानगरपालिका—२३, हात्तीवन स्थित “नवकिरण अनाथ असाहाय बाल उत्थान समाजका ४२ जना बालवालिकाहरुलाई खाद्यन्न सहयोग गरेको हो । बैंकका तर्फवाट सो सहयोगका सामाग्री बैंकका महाप्रबन्धक सुशील जोशीले संस्थालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त समाजले विभिन्न स्थानबाट
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलनमा भन्दा कर्जा प्रवाहमा बढी जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभावको संकेत देखिएको छ । बैंकमा जम्मा भएको रकम ठुलो परिणाममा बजारमा परिचालन भएको तर सोही अनुरुपमा निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिन थालेको हो
एनआईसी एशिया बैंकका तीन शाखारहित बैंकिङ्ग एकैसाथ संचालनमा
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंकले सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका वडा नं. ६ को सीतापुर, झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका, वडा नं. १ को गाडागल्ली र मेचीडाँगीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा एकैसाथ संचालनमा ल्याएको छ । यससँगै बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा ३५ पुगेको छ । बैंकले संचालनमा ल्याएको सीतापुर शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको समुद्घाटन लक्ष्मीपुर पतारी
बैंकिङ खबर । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र स्पारो पे प्रा. लि. बिच खल्ती (डिजीटल वालेट) सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सहमतीपत्रमा बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र स्पारो कम्पनीका निर्देशक ध्रुब अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापश्चात्, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकहरुले इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा मोबाईल बैंकिङ्गद्वारा आफ्नो खातामा रहेको रकम
सिर्जना फाइनान्सद्धारा भानुस्मृती विद्यालयलाई सहयोग
बैंकिङ खबर । सिर्जना फाईनान्स लिमिटेडले धरानको भानुस्मृती माध्यामिक विद्यालयलाई १५ थान पंखा सहयोग गरेको छ । गर्मीका कारणले सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई पठन पाठनमा असहज भएको भनी बिद्यालयले अनुरोध गरेकाले समाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तरगत सहयोग गरेको फाईनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवानीशंकर चापागाईँले बताए ।
वाणिज्य बैंक पुग्न २८ स्थानीय तह मात्रै बाँकी
बैंकिङ खबर । सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एक वाणिज्य बैंक पुर्याउने नीति लिएसँगै बैंकिङ पहुँच विस्तार पनि तीव्र गतिमा भएको छ । गत वैशाखा मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा अब २८ वटा स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंक पुग्न बाँकी रहेका छन् । ७५३ मध्ये वैशाख मसान्तसम्मा ७२५ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलिसकेका छन्
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई सुमेरु अस्पतालमा छुट
बैंकिङ खबर । ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले सुमेरु अस्पताल प्रा.लि.को विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा छुट पाउने भएका छन् । यससम्बन्धमा दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका कार्ड बिक्रि तथा बजार प्रबद्र्घन विभाग प्रमुख नवीन सुवेदी र अस्पतालका निर्देशक दिलिप डंगोलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पश्चात ललितपूरको धापाखेलमा रहेको सुमेरु अस्पतालमा उपचार
कामना सेवा विकास बैंक र खल्ती बीच सम्झौता
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंकले स्पारो पे को खल्ती डिजिटल वालेट सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । यससम्बन्धमा दुई पक्ष बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार, बैंकको मोवाईल बैकिङ सेवा लिएका ग्राहकले आफ्नो खातामा भएको रकम मोवाईल बैकिङ मार्फत खल्ती डिजिटल वालेटमा फण्ड लोड गर्न सक्नेछन् । खल्ती वालेट मार्फत ग्राहकले क्रेडिट कार्डको
हिमालयन बैंकद्धारा २४ बालबालिकालाई सहयोग
बैंकिङ खबर । हिमालयन बैंकले नागार्जुन न.पा.—५, सीतापाईलास्थित आदेश्वरमा रहेको “हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्स चिल्ड्रेन होम” का बालबालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्स चिल्ड्रेन होमका २४ जना बालबालिकाहरुलाई जुक्ताहरु तथा खाद्यान्नहरु (चामल, दाल, खाने तेल आदि), सावुन र खाना पकाउने ग्याँसहरु प्रदान गरेको हो । बैंकका महाप्रबन्धकसुशील जोशीले उक्त सहयोग सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरे ।
प्रदेश १ मा कामना सेवा विकास बैंकको थप दुई शाखा
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंकले प्रदेश १ मा थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका वडा न. ०९ र केराबारी गाउँपालिका वडा न. १० शाखा संचालनमा ल्याएको हो । यससँगै कामना विकास बैंकको शाखा संख्या ९१ पुगेको छ भने प्रदेश १ मा ११ पुगेको छ ।
तुलसीपुरमा नेपाल बैंकको १६२ औं शाखा स्थापना
सो कार्यक्रममा नगर प्रमुख पाण्डेले विभिन्न वित्तिय सेवामा बैकसंग हातेमालो गर्न उपमहानगर उत्शुक रहेको बताए । यस्तै बैकका का.मु.सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बैंकले विश्वसनीय, अत्याधुनिक र गुणस्तरीय बैकिंङ सेवा उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता गरे । त्यस्तै नेपाल बैक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय ५ नम्बरका प्रमुख पासांग दोर्जी शेर्पाले बैंकसंग उच्चतम सुरक्षा र प्रतिफलसहितको निक्षेपसेवा ,विभिन्न उद्यम
भारतको एपोलो हस्पिटलमा एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई छुट
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरुले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १५% सम्मको छुट पाउने भएका छन् । यस सम्बन्धमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रदान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने र हस्पिटलका उप–महाप्रबन्धक अजय भारद्वाजले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बिएफआइएन र सिपिएसस बिच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
बैंकिङ खबर । बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्टिच्यूट अफ नेपाल लि. ( बिएफआइएन) र कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज (सिपिएससी) बिच क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बिएफआइएन को तर्फबाट प्रबन्धनिर्देशक डा. विनोद आत्रेयले हस्ताक्षर गरेका हुुन् । जुन १७ बाट २१ सम्म बिएफआइएन र सिपिएससको संयुक्त आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा संचालन